The Nice Guys (2016) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
R 2016 116 min Action, Comedy, Crime
IMDB: 7.4/10 236,472 votes
Julia Tasker, Luca Kouimelis, Shane Black
Angourie Rice, Beau Knapp, Keith David, Kim Basinger, Lois Smith, Margaret Qualley, Matt Bomer, Russell Crowe, Ryan Gosling, Yaya DaCosta
IMDb (7.4/10)…Rotten Tomatoes(92%)
ယခုဇာတ်ကားကို ကြည့်နေစဉ်မှာ ကျွန်တော်ဘယ်ဇာတ်ကားတွေကို သွားသတိရမိစေလဲဆိုတော့ Chinatown နဲ့ L.A. confidential ဇာတ်ကားတွေပဲ။ ဒါပေမဲ့ ထိုဇာတ်ကားတွေနဲ့ကွာခြားချက်တစ်ခုကတော့ အသောမတတ်နိင်အောင် ရယ်မောနေစေရတဲ့ ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေပဲ။ ဟာသလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင် “Lethal Weapon” နဲ့“Boogie Nights” တို့ နဲ့ လည်းသွားဆင်တူသေးတယ်။ ခင်ဗျားဟာ ဇာတ်အိမ်ကောင်းကောင်းတစ်ကား ကြည့်ချင်မယ်။ Action ခန်းတွေကိုလည်း များနိုင်သမျှများ၊ ကြမ်းနိုင်သမျှကြမ်းစေချင်မယ်။ ဒီကြားတည်း ဟာသခန်းလေးတွေလည်း ကြည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ 2016 အတွက် ရှားရှားပါးပါး ယခု The Nice Guys ဆိုတဲ့ တစ်ကားလေးပဲ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ထပ် တစ်ချက်က ဇာတ်သိမ်း၊ အားမရခဲ့ပေမဲ့ ယုတ္တိရှိတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပြင် လက်တွေ့ လောကကြီးတွေထဲမှာလည်း ယခုအတိုင်းပင် ငွေကြေးရှိရင် ဥပဒေတွေက လွတ်မြောက်စမြဲပင်လေ။ ဒီဇာတ်ကားကို Director Shane Black က ကိုယ်တိုင်ရေးသားကာ ကိုယ်တိုင် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ ဒါကြောင့် Lethal Weapon နဲ့ ဆင်တူတယ်လို့ ခံစားရတာကိုး။ သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ်ကတော့ Ryan Gosling နဲ့Russell Crowe။ ဟာသမဟုတ်တဲ့ ဟာသကောင်နှစ်ယောက်ပါဗျာ။ အခုချိန်ထိ သူတို့ နှစ်ယောက်ပုံတွေ မျက်လုံးထဲမှာ ပြန်မြင်လာပြီး ရယ်ချင်မိသေးတယ်။ The Nice Guys ဟာ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ The Nicest Movie of 2016 ပါပဲ။
(ရုပ်ရှင်အညွှန်းကို Movies-we watch,we feel. FB Page မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။)
Julia Tasker Luca Kouimelis Shane Black
Angourie Rice Beau Knapp Keith David Kim Basinger Lois Smith Margaret Qualley Matt Bomer Russell Crowe Ryan Gosling Yaya DaCosta
Adriana Karras Angourie Rice Beau Knapp Carson Meyer Cayla Brady Charles Green Chloe Hurst Daisy Tahan Dominic Bagarozzi Garrett Carpenter Gary Weeks Gary Wolf Gil Gerard Greg Lindsay Hana Yuka Sano Hank Quillen Hannibal Buress Jack Kilmer Joanne Spracklen Joshua Hoover Karrueche Tran Keith David Kim Basinger Lance Valentine Butler Lauren Bair Lauren Marini Lexi Johnson Lois Smith Maddie Compton Margaret Qualley Matt Bomer Matthew Warzel Meredith Berg Michael Beasley Michelle Rivera Milo Wesley Murielle Telio Rachele Brooke Smith Rebecca Dalton Rusk Robert Downey Jr. Russell Crowe Ryan Gosling Ryan Powers Sala Baker Steve Wilder Tammi Arender Terence Rosemore Ty Simpkins Ward Roberts Yaya DaCosta Yvonne Zima Zarah Kulczycki
Option 1 mfile.cloud 550 MB SD (480p)
Option2drive.google.com 550 MB SD (480p)
Option3drive.google.com 550 MB SD (480p)
Option4onedrive.live.com 550 MB SD (480p)
Option5megaup.net 550 MB SD (480p)
Option6mfile.cloud 1.3 GB HD
Option9onedrive.live.com 1.3 GB HD
Option 10 megaup.net 1.3 GB HD
Option 11 mfile.cloud5GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 12 drive.google.com5GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 13 drive.google.com5GB FHD DTS-HDMA 5.1
Option 14 onedrive.live.com5GB FHD DTS-HDMA 5.1
My Way (2011) 2011
Fullmetal Alchemist (2017) 2017